दीपक अग्रवाल भन्छन् : टीभीएस आगामी ३ वर्षमै पहिलो वा दोस्रो नम्बरमा हुनेछ | Automotive News Nepal
दीपक अग्रवाल भन्छन् : टीभीएस आगामी ३ वर्षमै पहिलो वा दोस्रो नम्बरमा हुनेछ १५ असोज, २०७६
टीभीएस बाइक तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्स र टीभीएस बाइकको सहकार्य भएको चार वर्ष पुगेको छ । सो अवसरमा जगदम्बा मोटर्सले देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
जगदम्बा मोटर्सले काठमाडौं र देशभरका विभिन्न स्थानमा ‘स्वास्थ्यका लागि रमाइलो दौड’ आयोजना गरेको छ । चाडपर्वको अवसरमा टीभीएस दसैंको दौड योजना ल्याएको छ । देशभर विभिन्न एक्सचेन्ज अफर र अन्य कार्यक्रम समेत भइरहेका छन् । टीभीएस ह्विली बिट्स कन्सर्ट र सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिए ।
चार वर्षको अवधिमा नेपाली बजारमा टीभीएस ब्रान्डले एक फरक पहिचान कायम गरेको छ । यसै सन्दर्भमा जगदम्बा मोटर्सका भाइस प्रेसिडेन्ट दीपक अग्रवालसँग अटोमोबाइल /नेपाल अटो डटकम टिमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
टीभीएसले आयोजना गरेको स्वास्थ्यका लागि रमाइलो दौड कस्तो कार्यक्रम हो ?
टीभीएसले चाडपर्वको अवसरमा टीभीएस दसैंको दौड नामक स्किम ल्याइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्यको लागि समेत उपयोगी हुने गरी केही गरौं भन्ने विचार आयो । रन फर फनको रुपमा केही गरौ भन्ने लाग्यो । हामी मध्ये धेरैको लाइफस्टाइल स्वास्थ्य प्रति सचेत हुने खालको छैन । यसका लागि सबैभन्दा सजिलो, प्रभावकारी र मितव्ययी तरिका भनेको दौडिनु हो ।
डाक्टरहरुले समेत दौडिनुलाई नै एक प्रकारको औषधि मानिसकेका छन् । यो अवस्थामा हाम्रा ग्राहक, सहकर्मी र हामीसँग सम्बन्धित सबैको स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी हामीले एक अभियानको रुपमा यो इभेन्ट आयोजना गरेका हौ । यसलाई हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात सीएसआर पनि भन्न सकिन्छ ।
टीभीएसले चाडपर्वका लागि कस्तो योजना ल्याएको छ ?
टीभीएसले दसैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै दसैंको दौड योजना ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्ना सबै स्कुटर र मोटरसाइकलमा एक लाखसम्म छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत बाइक वा स्कुटर किन्नु भन्दा पहिले घरैबाट टीभीएस नेपालको वेबसाइटमा लगइन गरी १ लाख रुपैयाँ सम्म जित्न सकिने छ । त्यसैगरी किन्न गइसके पछि किन्ने वित्तिकै १०० प्रतिशत क्यास ब्याकको अफर दिने भएको छ । दुबै अफर स्क्र्याच कार्ड मार्फत उपलब्ध गराइने छ ।
चार वर्षको अवधिमा टीभीएस ब्रान्डले एक फरक पहिचान कायम गरेको छ । कस्तो छ हालको बजार अवस्था ?
हामीले टीभीएसलाई जगदम्बा मोटर्स अन्तर्गत सञ्चालन गरेको चार वर्ष भयो । यो अवस्थामा म गर्वका साथ भन्न सक्छु चार वर्षको अवधिमा हामी नेपालभर नै ‘वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ ब्रान्ड’ भयौ । नेपालमा विगत चार वर्षको समग्र अटोमोबाइल बजार हेर्नुभयो भने यसमा वृद्धि भएको छैन । तर हामी भने यो अवधिमा प्रत्येक वर्ष ३५/४० प्रतिशतको दरले बजार वृद्धि गरिरहेका छौ । त्यसैले हामीले अन्य ब्रान्डसँग तुलना गर्दा हामी सर्बाधिक छिटो बजार वृद्धि भएको ब्रान्ड भन्न सक्छौ । ग्राहकको ब्रान्डप्रतिको विश्वसनियताका कारण नै यो सम्भव भएको हो ।
यद्यपि यसको पछाडि धेरै नै तथ्यहरु छन् । जगदम्बाले लिएकै भरमा यस्तो भएको होइन । यसमा कम्पनीको साथ सहयोगको धेरै भूमिका छ । समय सुहाउदो, बजार सुहाउदो प्रोडक्ट कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको छ र हामीले नेपाली बजारमा लिएर आइरहेका छौ ।
पहिलो दोस्रो वर्षमा हेर्ने हो भने हामीले बेस लेभलमा काम ग¥यौ । पहिले हाम्रो नेटवर्क थिएन । हामीले नेटवर्कका लागि कार्य ग¥यौ । अहिले पनि टीभीएसको स्पेयर पार्ट्स पाइदेन र पाए पनि महंगो छ भने आम मान्यता छ । हामीले स्पेयर पार्ट्स नेटवर्कका लागि कार्य ग¥यौ र हाल टीभीएसको नेटवर्कमा सतप्रतिशत स्पेयर पार्ट्स पाउन सकिन्छ । पार्ट्स पाइदैन र महंगो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले तोड्यौ । नेपालभर करिव ३ सय सर्भिस सेन्टरको स्थापना गर्न सफल भयौ । कुनै स्थानमा हामीले आफ्नै सर्भिस सेन्टर खोल्यौ, कतै डिलर खोल्यौ र कतै निजी ग्यारेजसँग सहकार्य ग¥यौ । यससँगै हामीले नेपालभर करिव १० हजार मेकानिक्सहरुलाई तालिम प्रदान ग¥यौ ।
हाम्रो एउटा ‘साथ छ’ भन्ने नारा थियो । यसका लागि बाटो बाटोमा सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्न सफल भयौ । टीभीएस सधै साथ छ भन्ने नाराले साकार रुप लियो । प्रत्येक घर घरमा टीभीएसको वारेमा जानकारी प्रदान गर्न सफल भयौ । टीभीएस ब्रान्ड कस्तो हो ? यसका कम्पोनेन्ट कस्ता छन् ? भन्ने वारेमा सबै स्थानमा जानकारी प्रदान गर्न सफल भयौ । यी सबै पूर्वाधार र स्ट्यान्डर्डले निकै नै भूमिका खेलेको छ ।
चार वर्ष अगाडिको र आजको हाम्रो सोरुमको स्ट्यान्डर्ड हेर्ने हो भने धेरै नै फरक पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालभर काम गरिरहेका हाम्रो टिममा करिव ४ हजार जनशक्ति छन् । सेल्स, सर्भिस, स्पेयर आदिमा यी दक्ष जनशक्तिले कार्य गरिरहेका छन् । यी सबै कारणले हाम्रो बजार वृद्धि भएको हो ।
यसका साथै हामी मार्केटिङमा पनि कार्य गरिरहेका छौ । विभिन्न स्किम ल्याइरहेका छौ । विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु, विभिन्न क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, ब्रान्ड एम्बेसडरको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न नयाँ आयाममा कार्य गर्ने गरिरहेका छौ । यी सबैको यसमा विशेष भूमिका छ । ती मध्ये पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने टीभीएसले जहिले पनि गुणस्तरमा विश्वास गर्छ । करिव १ सय १७ वर्ष पुरानो कम्पनी हो टीभीएस । पहिले पार्ट्स उत्पादन देखि प्रारम्भ भएको यसको यात्रा पछिल्लो अवस्थामा टु ह्विर र थ्री ह्विलर सम्म पुगको हो । अहिले पनि विभिन्न कम्पनीका उत्पादनमा टीभीएसका पार्ट्स प्रयोग गरिएका हुन्छन् । त्यसैले आफ्नै उत्पादका लागि झन् गुणस्तरीय पार्ट्स प्रयोग हुने नै भए । त्यसैले नै कसैले एक पटक टीभीएसका बाइक वा स्कुटर चढेको छ भने अन्य ब्रान्डमा जाने सम्भावना कमै हुन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि टीभीएसका रिपिटेड कस्टमर धेरै छन् । ग्राहक सन्तुष्टीको लेभल उच्च छ । हामीले यसलाई निकै नै माथि उठाएका छौ ।
हामी अझै मेहनत गर्दैछौ । गर्न बाँकी धेरै छ । हामी एक घर एक टीभीएसको सोचका साथ अगाडि बढेका छौ । सायद आउने समयमा यसलाई पुरा गर्नेछौ ।
टीभीएसका विभिन्न सेगमेन्टका बाइक र स्कुटर नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । युवा र अन्य सबै समूहका लागि उपयोगी मानिएका छन् । पछिल्लो अवस्थामा नयाँ मोडल पनि लन्च भइरहेको छ । कस्ता बाइक र स्कुटर छन् नेपाली बजारमा ?
स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा टीभीएस रेन्ज किङ ब्रान्ड हो । टीभीएसका जति रेन्ज सायद अरु कुनै पनि कम्पनीका छैनन् होला । हामीसँग एक सय देखि ३ सय १० सीसी सम्मका बाइक छन् । यी बाइक हरेक वर्गलाई लक्ष्यित गरिएका छन् । तराईमा विशेष रुपमा उपयोग हुने एक्सएल १०० नामक मोपेड छ । यो त्यो क्षेत्रमा निकै नै उपयोगी छ र यसलाई दुई चक्के मालगाडी पनि भनिन्छ । भारतमा निकै नै लोकप्रिय यो बाइकले आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ भनी प्रमाणित गरेको छ । त्यसैगरी १ सय १० सीसीमा रेडिअन ल्याएका छौ । पहिले पनि यही सेगमेन्टमा स्टार सिटी थियो । भारत पछि सबैभन्दा पहिले रेडिअन नेपालमै लन्च भएको थियो । भारतमै यसको धेरै माग भएर पु¥याउन नसकेको अवस्थामा पनि नेपालमा उपलब्ध गराइएको छ । १ सय २५ सीसीमा टीभीएसको स्ट्राइकर छ । नेपाली सडक, सडकको उचाई आदिलाई नै मध्यनजर गरी बनाइएको बाइक हो स्ट्राइकर । भारतमा यसको प्रयोग छैन । नेपाल र बंगलादेशलाई सुहाउदो गरी निर्माण गरिएकाले यसको बजार यी दुई देशमै बढी छ । यस्ता एक्स्क्लुसिभ प्रोडक्ट पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौ ।
५ वर्ष त अलि टाढा भयो । आगामी ३ वर्षमै हामीले आफूलाई पहिलो वा दोस्रो नम्बरमा पाउने गरी कार्य गरिरहेका छौ ।
हामीसँग १ सय ५०, १ सय ६० सीसीमा अपाचे छ । १ सय ६० सीसीमा कम्युटर र प्रिमियम सेगमेन्ट गरी दुई मोडल छ । स्टाइल र ठूलो टायर सहितको अपोच चाहनेका लागि १६० ४भी छ । त्यसैगरी २ सय र ३ सय १० सीसीका बाइक पनि छन् ।
स्कुटरको पनि हामीसँग फुल रेन्ज छ । युवायुवतीहरुका लागि स्कुटी जेस्ट छ । स्पिड र पिकअप चाहनेहरुका लागि जेस्ट उपयोगी छ । फुल स्टिल बडी सहितको स्कुटर चाहने गृहिणीहरुका लागि विगो छ । स्टाइल फ्याक्टर खोज्नेहरुका लागि जुपिटर क्लासिक छ । स्पिड, स्टाइल र उपयुक्त मूल्य सहितको स्कुटर चाहने र मार्केट ट्रेन्डीहरुका लागि एनटर्क छ । हामीले इन्डोनेसियाबाट ड्याज स्कुटर समेत ल्याएका छौ । बच्चा देखि बुढा सम्म र विद्यार्थीदेखि प्रौढ सम्म सबैका लागि उपयुक्त रेन्ज हामीसँग छन् ।
टीभीएस भन्ना साथ पावर प्रोडक्ट हो र यो पर्फमेन्सका लागि अब्बल छ भन्ने बुझाई पनि छ । टीन एजरका साथै अन्य सबै उमेर समूहले यसलाई कसरी लिएका छन् ?
टीभीएसलाई सबै उमेर समूहकाले रुचाएका छन् । टीभीएसको अपाचे मोडललाई विशेष गरी टीन एजरहरुले बढी रुचाएका हुन् । अपाचेमा पनि १ सय ५० र १ सय ६० मा दुई मोडल छन् । युवाहरुका लागि १६० ४भी र अन्यका लागि १६० २भी उपयुक्त हुन सक्छ । यसमा पनि हालै रेस एडिसन भनेर नयाँ मोडल आएको छ । अन्य विभिन्न समूहका विभिन्न मोडल पनि छन् । टीभीएसले हरेक कुरालाई रेसिङसँग जोड्छ । त्यसैले यसलाई पावर प्रोडक्ट उपलब्ध गराउने ब्रान्ड पनि भनिएको हो । यद्यपि पावर प्रोडक्ट वाहेक सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त विभिन्न मोडल नेपाली बजारमा समेत उपलब्ध छन् । त्यसैले टीभीएस ‘वान स्टप सोलुसन फर एभ्रिवान’ हो ।
हालै नाडा अटो शोमा लन्च गरिएको रेडिअनबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
समग्र नेपालको बजार हेर्ने हो भने एक सय सीसी सेगमेन्टको बजार खुम्चिदै गएको छ । मानिसहरु पावर सेगमेन्टमा बढी जोड दिइरहेका छन् । तर उपयुक्त प्रोडक्ट भयो भने यसको बजार पनि अवश्य बढ्छ । विस्तारै १ सय २५ सीसी प्रयोग गरिरहेकाहरु पनि एक सय सीसीमा ढल्किने मैले अनुमान गरेको छु । सरकारले पनि कम सीसीका बाइकलाई प्राथमिकता दिएर बढी सीसीका लागि बढी कर लगाउने नीति लिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा विशेष गरी सहरी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा यसको बढी माग हुने हाम्रो अनुमान छ ।
नाडामा लन्च गर्दा पहिलो दिनमै २ सय ५० युनिट डेलिभरी भएको थियो । हामी अहिले पनि नियमित रुपमा यसको बिक्री गरिरहेका छौ । यद्यपि बजारै सानो भएकाले अन्य बाइकको तुलनामा ठूलै आशा भने गरेका छैनौ ।
टीभीएस रेसिङ भनेर सबैतिर सुनिन्छ । टीभीएसले रेसिङ बाइकमा पनि विशेष जोड दिइरहेको छ । यो अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा टीभीएसले रेसिङ वा यस्तै अटो स्पोर्ट्सको विकासको लागि के गरिरहेको छ ?
हामी निश्चित रुपमा रेसिङ वा अटो स्पोर्ट्समा पनि योगदान दिइरहेका छौ । हामीले नेपालमा हुने विभिन्न रेसिङहरुको प्रायोजन पनि गरिरहेका छौ । अहिले पनि यस्तै एक स्किम ल्याएका छौ । टीभीएसका बाइक टेष्ट राइड गर्नेलाई मद्रास रेस ट्रयाकको अनुभव दिलाउने छौ । नोभेम्बर सम्म हुने टेष्ट राइडबाट २५ जनालाई त्यसको अनुभव दिलाउने छौ । हामी भनेर मात्रै होइन, गरेर देखाउदै छौ । धुलिखेलमा नासाले बनाएको रेस ट्रयाकमा पनि नासासँग मिलेर सहकार्य गर्दैछौ ।
दुई पांग्रे सवारी साधनको बजार गाउँ गाउँमा विस्तार भइरहेको छ । यो अवस्थामा बिक्री र बिक्री पछिको सेवा प्रदान गर्नका लागि पनि चुनौती होलान् नि ?
हो, चुनौती त अवश्य छ । तर हामीले त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएका छौ । यसका कारण नै हामीले बाइक वा स्कुटर बेचेर नेटवर्क तयार गर्ने भन्दा पनि पहिले नेटवर्क तयार गरेर बल्ल बाइक वा स्कुटर बेच्ने नीति लियौ । हामीले सीएसपी अर्थात सर्टिफाइड सर्भिस प्वाइन्ट नेपालभर नै स्थापित ग¥यौ । दार्चुला, दीपायल, बैतडीदेखि ताप्लेजुङ सम्म यस्तो व्यवस्था गर्दा यसको नतिजा पनि राम्रो पायौ । कोही नपुगेको स्थानमा हामी पुग्दा फाइदा पनि भयो । हिजोको दिनमा त्यो चुनौती थियो भने आजको दिनमा त्यो अवसर भयो । सबैले टीभीएसको वारेमा थाहा पाए । मेकानिक्सहरुका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था ग¥यौ । केही समय पहिले मात्र हामीले पीजीएम ३००० नामक कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यौ । यसबाट हामीले ३ हजार मेकानिक्सलाई तालिम प्रदान ग¥यौ ।
अबको ५ वर्ष पछि हामीले टीभीएसलाई नेपाली बजार हिस्साको आधारमा कुन स्थानमा पाउने अनुमान गर्न सकिएला ?
५ वर्ष त अलि टाढा भयो । आगामी ३ वर्षमै हामीले आफूलाई पहिलो वा दोस्रो नम्बरमा पाउने गरी कार्य गरिरहेका छौ । यसैले नै टीभीएसको नेपालमै एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । सिमरामा हाम्रो एसेम्बलिङ प्लान्ट लगभग अन्तिम तयारी अवस्थामा छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । मेसिन जडान कार्य भइरहेको छ । सायद दसैंमा परीक्षण गरी दसैं पछाडि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन पनि शुरु हुन सक्छ । प्रारम्भमा हामीले टीभीएसको थ्री ह्विलर उत्पादन गर्नेछौ सायद । त्यसपछि सबै सेगमेन्टका सवारी साधन यही नै उत्पादन हुनेछ ।
काठमाडौं र ललितपुरमा मोनोरेल कुदाउने निर्णय
काठमाडौं - काठमाडौंको बुढानिलकन्ठबाट ललितपुरको गोदावरीसम्म मोनोरेल चलाउने निर्णय...
सकिएला सिन्डिकेटको सकस ?
हाल सिन्डिकेट शब्द निकै नै चर्चित छ । यो शब्द अन्य क्षेत्रका लागि पनि काम लाग्ने...
एक वर्षमा १४ हजार भन्दा वढिलाई लाइसेन्स, १० करोड ६८ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन
काठमाडौं– यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भ¥याङले स्थापनाको पहिलो वर्ष भित्रैमा १...